Myanmar Monk Student Association: July 2012
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ အတွက် ၀ါဆိုလပြည့်အကြောင်းသိကောင်းစရာ
၀ါဆိုလပြည့်နေ့ ရောက်တော့မှာမို့ သိကောင်းစရာလေးတွေ့ မှတ်သားရအောင်....
(၁) ၀ါဆိုလပြည့်နေ့ဆိုတာဘာလဲ ?
“သန္ဓေတောထွက် ဓမ္မစက် ဟောမြွက်သံချို လ၀ါဆို” ဆိုတဲ့စကားလေးအတိုင်း ဘုရားလောင်းပဋိသန္ဓေ
တည်သောနေ့၊ တောထွက်သောနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မစင်္ကြာတရားဦးဟောကြားတော်မူသောနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားသည်
ခာက်နှစ်တာကာလပတ်လုံး လူသာမန်တို့ ကျင့်ရန်ခဲယဉ်းလှတဲ့ ဒုက္ကရစ၇ိယာအကျင့်မြတ်ကို ကျင့်ကြံကြိုးကုတ် ပွားများအားထုတ်ခဲ့ရာ
နောက်ဆုံး၌ မဇ္ဈိမပဋိပဒါဟုခေါ်သည့် အလယ်အလတ်အကျင့်တရားလမ်းစဉ်ကို တွေ့မြင်ပြီး လက်ယာအစွန်းနှင့် လက်ဝဲအစွန်းတည်းဟူသော
အစွန်းတရားနှစ်ပါးကို ရှောင်ကြဉ်ကာ သစ္စာလေးပါး မြတ်တရားကို သိမြင်တော်မူခဲ့သည်။ ထိုသစ္စာလေးပါး မြတ်တရားသည်
ဓမ္မစင်္ကြာတရားတ်ာပင်ဖြစ်သည်။ မိဂဒါဝုန်တော၌ ပဉ္စ၀ဂ္ဂီတို့အား အမှူးထားပြီး ၀ါဆိုလပြည့်နေ့၌ ဓမ္မစင်္ကြာတရားဦးကို စတင်ဟောတော်မူသော
နေ့လည်းဖြစ်သည်။ မြတ်ဘုရား၏ပညတ်တော်အရ ရဟန်းသံဃာတော်များ ၀ါတွင်းသုံးလ ၀ါဆိုဝါကပ်သည်ကို အကြောင်းပြု၍ ၀ါဆိုလဖြစ်ပေါ်လာရသည်။
(၂) ဘာကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက်အရေးပါတာလဲ ?
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အတွက် အထွတ်အမြတ်ထားရာ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့
(၁) ပဋိသန္ဓေတည်သည့်နေ့= မဟာသက္ကရာဇ် - ၆၇၊ ၀ါဆိုလပြည့် (ကြာသပတေးနေ့ )
(၂) တောထွက်သည့်နေ့= မဟာသက္ကရာဇ် - ၉၇၊ ၀ါဆိုလပြည့် (တနင်္လာနေ့ )
(၃) ဓမ္မစကြာတရားဦးဟောနေ့= မဟာသက္ကရာဇ် - ၁၀၃၊ ၀ါဆိုလပြည့် (စနေနေ့ )
(၄) သောတာပန်လူသားစပေါ်သည့်နေ့= မဟာသက္ကရာဇ် - ၁၀၃၊ ၀ါဆိုလပြည့် (စနေနေ့ )
(၅) သံဃာရတနာစပေါ်သည့်နေ့= မဟာသက္ကရာဇ် - ၁၀၃၊ ၀ါဆိုလပြည့် (စနေနေ့ ) တို့ဖြစ်တဲ့အတွက် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အတွက် အလွန်ရေးပါလှပါတယ်။
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ မောင်သိရီ on Saturday, 21 July 2012
ကျောင်းပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော် အရည်အသွေး မပြည့်မီကြောင်း ထိုင်းအစိုးရ ကြေညာ
ကျောင်း ၂၀၀၀ ကျော် အဆင့်မမီကြောင်း အမျိုးသား ပညာရေးနှင့် အရည်အသွေး စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ (Office for National Education Standards and Quality Assessment မှ ဒါရိုက်တာက ပြောဆိုလိုက်သည်။
“ထိုင်းတနိုင်ငံလုံးမှာ ကျောင်းပေါင်း ၂၂၉၅ ကျောင်းဟာ အရည်အသွေး စစ်ဆေးတဲ့အခါ အဆင့် မမီတာကို တွေ့ရတယ်” ဟု ဒါရိုက်တာ Channarong Pornrugroj က ပြောဆိုခဲ့သည်။ အမျိုးသား ပညာရေးနှင့် အရည်အသွေး စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ (Office for National Education Standards and Quality Assessment အဖွဲ့သည် ထိုင်းနိုင်ငံ တ၀ှမ်းရှိ ကျောင်းပေါင်း ၃၄,၀၄၀ ကို စစ်ဆေးရန် ရှိပြီး ကျောင်းပေါင်း ၇,၉၈၅ ကျောင်းကို စစ်ဆေးပြီးဖြစ်သည်။
ကျောင်းပေါင်း ၃၃၃ ကျောင်းသည် အထူး ကောင်းမွန်သည့် အဆင့်တွင် ရှိပြီး၊ ၅၃၅၇ ကျောင်းသည် အသင့် ကောင်းမွန် သည့် အဆင့်တွင် ရှိကာ၊ ၂၂၉၅ ကျောင်းသည် အဆင့် မပြည့်မီသည်ကို တွေ့ရသည်။ အဆင့် မမီသော ကျောင်းများသည် အထူးသဖြင့် ကျောင်းငယ်လေးများ ဖြစ်ပြီး ဝေးလံသည့် ဒေသမှ ကျောင်းများ ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရသည်။
ဒါရိုက်တာ Channarong Pornrugroj က ပြောဆိုရာတွင် အဆင့် မမီရခြင်းသည် ဆရာများ မပြည့်စုံမှုနှင့် ဆရာများသည် သင်ကြားရေး နည်းစနစ်ကို နားမလည်မှုကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
တက္ကသိုလ်များ၏ အရည်အသွေးနှင့် ဆရာများ၏ အရည်အချင်းကိုပါ စစ်ဆေးခဲ့သည်။ တက္ကသိုလ် ကျောင်းပေါင်း ၇၂ ကျောင်းကို စစ်ဆေးခဲ့ရာ ၄၅ ကျောင်းမှာ အရည်အသွေး ပြည့်မီကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ Office of the Higher Education Commission (Ohec) ၏ အထောက်အထားများအရ တက္ကသိုလ်ဆရာများ၏ အရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ရန် လိုအပ်နေကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် တက္ကသိုလ် ဆရာ ၅၆၉၇၈ ဦး ရှိသည့်အနက် ၃၈၂၃၈ ဦးမှာ သင်ကြား ရေး အတွေ့အကြုံတွင် အကန့်အသတ် ရှိနေကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဆရာများ၏ သင်ကြားရေးဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံနည်းပါးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်မိကြောင်း “ တက္ကသိုလ် ဆရာများ၏ အရည်အသွေး မြင့်မားလာရေးအတွက် သုတေသန ပြုလုပ်နိုင်ရန် ငွေကြေး ထောက်ပံ့ရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။ ထိုင်းအစိုးရသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် အာစီယံ စီးပွားရေးဇုန် မတိုင်မီ နိုင်ငံ၏ ပညာရေး အဆင့်အတန်း မြင့်မားလာရေးကို အထူး ဂရုတစိုက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အာဝေဏိကဂုဏ်တော် (၁၈) ပါး
၁။ ။ အတီတံသေ ဗုဒ္ဓဿ ဘဂ၀တော အပ္ပဋိဟတံ ဥာဏံ။
အတိတ်ကာလ၌ အဆီးအတား အပိတ်အပင် မရှိသော ဥာဏ်တော်နှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော မြတ်စွာဘုရား။
၂။ ။ အနာဂတံသေ ဗုဒ္ဓဿ ဘဂ၀တော အပ္ပဋိဟတံ ဥာဏံ။
အနာဂါတ်ကာလ၌ အဆီးအတား အပိတ်အပင်မရှိသော ဥာဏ်တော်နှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော မြတ်စွာဘုရား။
ချင်းမိုင်-ဇူလိုင် ၁၃ ရက် သောကြာနေ့
ချင်းမိုင်ရောက် မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ စုပေါင်း၍ မဟာချူလာတက္ကသိုလ်တွင် တက်ရောက် ပညာသင်ကြားနေကြသော မြန်မာကျောင်းသား ရဟန်းတော် အပါး (၂၄) ပါးတို့အား ၀ါဆိုလျှာ သင်္ကန်း ဆက်ကပ် လှူဒါန်းပွဲကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
အခမ်းအနားကို မဟာချူလာတက္ကသိုလ် ဟောခန်းမတွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး ပရိသတ် ၃၀၀ ခန့်မှ၄၀၀ အထိတက်ရောက်နိုင်သည့်အကျယ်အ၀န်းရှိကြောင်းနှင့်သံဃာတော်တို့အားသင်္ကန်းဆက်ကပ်ခြင်းအပါဝင်
အခန်း အနားတွင်ဗုဒ္ဓတရားတော်များဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးခြင်း ဓမ္မစာပေများလှူဒါန်းခြင်း၊ရေစက်ချအမျှပေးဝေခြင်း များနှင့် စေတနာရှင် အသီးသီးတို့မှ လှူဒါန်းမှုများဆောင်ရွက်ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအလွယ်တကူလာရောက်တတ်ရန် အောက်ဖေါ်ပြပါ လမ်းညွှန်အတိုင်း လာရောက်နိုင်ကြကြောင်းသိရသည်။
အခန်း (၁၃၁) ၃ လွှာ၊ အစည်းဝေးခန်းမ
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ ကိုကျော် on Thursday, 12 July 2012
“ ဒီမနေ့မနက်က ရဲတွေရောက်တယ်။ ကျောက်ဖြူက ဆရာဝန်ကြီးတွေ မရောက်သေးတဲ့အတွက် ဘာမှမ လုပ်ကြသေးဘူး။ ရွာသားတွေကို စစ်ဆေးမေးမြန်းတာလည်း မရှိသေးဘူး။ မွတ်ဆလင် လူမျိုး နှစ်ဦးကိုတော့ ရွာက လူတွေ သံသယ ရှိနေကြတယ်။ ဆရာဝန်တွေ အလာကို စောင့်နေကြ တယ်။”
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ ( MMSA ) on
From : The Voice Weekly ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကြောင့် အရေးပေါ် ထုတ်ပြန် ကြေငြာခဲ့ရသည့် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် မြန်မာ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကတ်ပြားများကို မှန်ကန်မှု ရှိမရှိ စစ်ဆေးလျက် ရှိပြီး ယင်းကတ်ပြား မရှိသူများအား လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး အက်ဥပဒေဖြင့် အရေးယူသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးခင်ရီက ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့သည်။ လက်ရှိ အခြေနေတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ကယ်ဆယ်ရေး စခန်း ၆၇ ခုနှင့် နီးစပ်ရာ ရပ်ကွက် အတွင်းတွင် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး မှတ်ပုံတင်ကတ်ပြား ကိုင်ဆောင်ခြင်း ရှိမရှိကို စစ်ဆေးလျက် ရှိပြီး ယင်းပြည်နယ် အတွင်းရှိ ဝန်ထမ်း ၂၇၅ ဦးဖြင့် စစ်ဆေးလျက် ရှိပြီး နေပြည်တော် လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာနမှ ဝန်ထမ်း ၈၅ ဦးကို ထပ်မံ စေလွှတ်မည် ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ကြီး ဦးခင်ရီက ဖြည့်စွက် ပြောကြားသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဇွန်လဆန်းပိုင်းမှ စတင်ကာ ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပဋိပက္ခများကြောင့် သေဆုံးသူ ဦးရေမှာ ၆၈ ဦးထိ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောမြို့နယ်များတွင် ဒေသခံ ရခိုင် တိုင်းရင်းသားများမှာ ဇာတိဒေသ၌ ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများ အဆမတန် များပြားနေမှုကြောင့် နေရင်း ဒေသသို့ ပြန်မသွားရဲကြကြောင်း ရခိုင် တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ ဗဟို အလုပ်မှုဆောင် တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ younger on Monday,2July 2012